Rafael Caunedo. Kubvunzana nemunyori weChishuwo Chetsaona | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Rafael Caunedo. Facebook nhoroondo.
A Raphael Caunedo Ndakasangana naye iye pachake semutungamiriri pamusangano wevaverengi wakarongwa na organizedmbito Cultural kuti titaure naye Sunday Villar. Ndakabva ndamutsvaga. Uye pakutanga kwemwedzi uno akaburitsa bhuku rake idzva, Kuda njodzi. Ndinoda kukutendai nemutsa wenyu uye nenguva yakatsaurirwa izvi indavhiyu kwaanotiudza nezvake uye nezve zvimwe zvakawanda.
BHUKU NEWS: Kuda njodzi ndiyo nyaya yako nyowani. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
RAFAEL CAUNEDO: Semazuva ese, mazano anobva mukukubvunza mibvunzo. Rimwe zuva, nemukana, ndakaona musikana mudiki kwazvo icho chaive chikamu cheyuniti ye mhirizhonga. Vakauya kubva kubasa, nevadziviriri vavo vachiripo, yunifomu yavo yakasviba neupfu nemazai - handidi kutsanangura chikonzero - uye ndakatarisana nemamiriro ezvinhu. Pandakamutarisa, ndakafunga kuti: Achava nevana here? Mucheche anga akakumirira pamba here? Saka ndakafunga kubvisa mukadzi iyeye pachokwadi uye Ndakamusandudzira Blanca Zárate. Uye ini ndinofungidzira kuti mungano zvakanyanyisa.
RC: Chokwadi ndechekuti Ini ndinongo rangarira zvinhu zvinondisiya imwe mhando ye paw anodhinda. Ini ndinofanira kuve neyekusarudza ndangariro. Ini chaizvo handirangariri bhuku rekutanga. Ndine mupfungwa mazita akapfuura nemaoko angu; ivo ndangariro dzehudiki hunofadza. Asi kana ndichifanira kutaura kuti seiAkanga ari iro bhuku rakachinja maitiro angu ekuverenga, ndizvo Ishe wemhete. Nekuda kwekuverenga kwake, ndakatanga kusevha vhiki yega yega kutenga mabhuku. Uye zvichingodaro kusvika nhasi. Handikwanise kurarama ndisina kuverenga; uye handikwanise kuzviita ndisina kunyora. Ini ndaigara ndichifarira kuzviita, asi ndaizeza kuratidza zvinhu zvangu. Kukanganisa. Zvese zvinhu zvakachinja zuva randakaperekedza shamwari kumusangano wekunyora. Pakati pewaini uye zvikamu zvecroquettes uye omelette tinoverenga nyaya dzedu. Pakarepo ndakanga ndichinyorera vamwe, kwete ini, uye izvo zvakachinja zvese.
RC: Ndinovada zvakanyanya. Ndakaverenga zvese. Ini ndinofungidzira kuti ndiri kusarudza zvinoenderana nemanzwiro andiri. Bhuku rega rega, kana munyori wega wega, ine nguva yayo. Ini ndinoda kuwana vanyori vatsva futi, Ndinozvibvumira kurairwa nevatengesi vemabhuku uyezve nehungwaru hwangu, asi chokwadi ndechekuti paive nemunyori uyo, paakazviziva, akaita kuti ndifunge nezve mukana wekuve munyori. Ndakafarira mabhuku ake uye naiye, enigma yake, hupenyu hwake hunoshamisa, hunhu hwake. Yakaverengerwa Thomas bernhard uye chinja maonero angu pane zvinyorwa.
RC: Kune chero munhu uyo, mushure mekugovana tafura uye jira repatafura panguva yekudya kwemanheru, ini ndoda kudzokorora. Havasi vazhinji vanogona kugara kanopfuura kamwe chete kwemanheru.
RC: Ini handina basa neruzha, kana mimhanzi, ini ndinogona kunyora chero kupi. Ndine nzvimbo yekupinda munyika yangu, kunyangwe iwe uri mune cafe yakakomberedzwa nevanhu. Chinhu choga chandisingakwanise kumira ndechekuti kune hurukuro padhuze. Ndinoomerera, handina hanya nekukakavadzana, ruzha, asi handigone kunyora ndikangowana mazwi akabatanidzwa nechinangwa.
RC: Ini ndiri kubva mangwanani biorhythms. Pfungwa dzangu dzinotomhanyisa mangwanani. Sezvineiwo, masikati akakodzera kuverenga. Panzvimbo? Pachokwadi, Handina nzvimbo yakatarwa. Ini ndinogona kunyora ndakazendama padanda remuti, pasi peawning pamhenderekedzo yegungwa, kana mune cafe ine jazz kumashure. Mumba mangu, ndinowanzo zviita chero kupi. Zvakwana kuti hapana mumwe padhuze neni ari kutaura.
RC: Ndakaverenga nekukurumidza. Ini ndinotsvaga muzvitoro zvemabhuku, ndinopota ndichitenderedza zvakawanda, uye panogara paine bhuku rinondizevezera, "Ndini." Uye ipapo ndinoitenga. Iyo inokanganisa zvinyorwa pabutiro rekumashure, iyo kavha, uye chirevo chisina kurongeka icho mukana unonditora kuenda nacho.
RC: Parizvino ndine HamnetnaMaggie O´Farrell.
Ini ndakabatanidzwa nechirongwa chandinosarudza kusaudza chero chinhu nezvacho kusvikira zvanyatso tsanangurwa. Ehe, ini ndinovimbisa kuti protagonist ichave kwaanofanirwa kunge asiri.
RC: Zvichienderana, Spain ndiyo imwe yenyika umo inoburitswa zvakanyanya kwazvo pasirese. Zvinopesana kuti kuverenga index Gungwa dzikisa kupfuura average. Ini handizive mhedzisiro iyi kupokana kunokonzera kune vaparidzi, asi ndinokuvimbisa kuti kana tikaverenga zvakawanda, zvingave zviri nani kwatiri tese.
RC: Handifunge kuti anonyora chero chinhu nezve COVID, kuvharirwa uye zvese izvo. Handinzwe senge. Nyika yekare yainyanya kuratidza kwandiri, saka Ini ndinonyora sekunge hapana chaitika nekuti ndine chokwadi chekuti zvese zvichapfuura uye isu tinodzokera kumatambudziko akafanana nenguva dzose, asi tisina mask kana kure kure kwenzanga. Ini ndinoda kukumbundirwa nekutsvoda pamusangano wekutanga, ndisina kubvunzwa kana wabayiwa jekiseni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Rafael Caunedo. Kubvunzana nemunyori weChishuwo Che tsaona